Simbi Zvipo |
Yakasarudzika Metal Belt Buckle
Pretty Shiny Zvipo zvinogara zvichipa mhando yepamusoro yesimbi menduru, chinetso chemari, pini mabheji, cufflinks uye zvakare hwakawanda hwakawanda hwetsika bhandi mabheji. Sezvaunoziva, zvakasarudzika bhandi mabhureki haasi ekungori mafashoni chete, asiwo chipo chakakura cheyeuchidzo, kuunganidza, kurangarira, kusimudzira, busin ...
Tsika Lapel Pini uye Mabheji
Pretty Shiny Zvipo zvinopa akasiyana siyana emhando yepamusoro emhando dzakagadziriswa lapel pini uye mabheji. Zvinhu zvakasiyana siyana zvinogona kunge zvichishandisa kugadzira pini yesimbi, inosanganisira mhangura, ndarira, ndarira, simbi, zinc alloy, simbi isina chinhu, aluminium, simbi isina simbi, pewter, sirivheri inoshamisa nezvimwe. Dzese dziri q ...
Yakakwira-mhando Tsika Cufflinks
Cufflink ndeye yekushongedza inosunga iyo yakapfekedzwa kusungira iwo mativi maviri emakutu pahembe. Yakagadzirirwa chete kushandiswa nehembe dzine mabhatani pamativi ese maviri asi pasina mabhatani. A peya inokudzwa & fashoni cufflink chipo chakakwana sarudzo kune varume iyo inoratidza kucherechedzwa o ...
Simbi Mota Zviratidzo kana Mabheji
Pretty Shiny Gifts inonyatso kuzivikanwa nekugadzira tsika zviratidzo zvemota, ese simbi mota mota pamwe neABS mota mabheji. Nepo simbi grill bheji inogona kugadzirwa mune zvakasiyana zvigadzirwa uye zvinopedzisa, senge yakadhonzwa mhangura cloisonné, foto yakavezwa yendarira kana aluminium yakapfava enamel, kufa uchikanda zinc al ...
Simbi Mari Zvikamu
Ndezvipi zvakakosha zvematare esimbi mari? Mari clip chishandiso chinowanzo shandiswa kuchengetedza mari nemakadhi echikwereti mune yakakwenenzvera fashoni kune avo vasingade kutakura chikwama. Kazhinji chidimbu chakasimba chesimbi chakapetwa kuita hafu, kuitira kuti mabhiri uye mota yechikwereti ...
Gorofu Hat Clip Nebhora Rinomaka
Tichifunga nezve mabhenefiti egorofu kuve mutambo wakasarudzika kubva munharaunda, mhuri padzinomhanyira kunonakidzwa nenzvimbo huru nemhepo yakachena, vana vakawandisa vakatanga kubuda mukati medenda. Ehe, naka goridhe zvishongedzo zvinosanganisira ngowani clip kwete chete kunakidzwa nevakawanda musika, asiwo kukurudzira uye enco ...
Divot chishandiso nebhora mucherechedzo
Nemweya wekuchengetedza nharaunda, golfer yega yega inofanirwa kuona kuti kugadzirisa kwaitwa nemazvo. Kunyangwe iwe uchikwanisa kushandisa iyo teeing nzvimbo kuti uite basa, iyo turf yekugadzirisa chishandiso inoshanda zvakanyanya. Chii chishandiso chekugadzirisa chinoshandiswa mugorofu? Vanhu vazhinji vanoda t ...
Shongedza Iyo Mask Neyakagadzirirwa Lapel Pini
Kunyangwe majekiseni ecoronavirus ari kusvika kwatiri, asi chero bedzi denda risati rapera, zvinokurudzirwa kupfeka masiki ekumeso kudzivirira kubva kuCOVID kwakawanda muna 2021. Kunze kwekungoti yekuvhiya masiki uye N95 mask, Pretty Shiny inogona kupa machira ane mavara. kumeso masiki ane c ...
SDG Pin Bheji
Sangano Romubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose rakazvipira kuzadzikisa Sustainable Development Goals (SDGs) panosvika gore ra2030. Kubudirira kwakasimba ndicho chinangwa chinofamba chaive chikumbiro chekutora danho muna 2015 kunyika dzose kubvisa hurombo hwakanyanya, nzara, kuchengetedza nyika uye kuona kuti. ..